"Tsy filan-javatra anefa no anaovako izany; fa izaho efa nianatra tsy hierina na manao ahoana na manao ahoana" - Fil. 4:11.
Manana ny vavolombelony mahatoky Andriamanitra, izay tsy miezaka manao ny efa voalazan'i Kristy fa tsy ho tanteraka, dia ny fiezahana hanompo an'Andriamanitra sy Mamona izany. Jiro mirehitra sy mamiratra ao anatin'ny fahamaizinana ara-pitondrantena eto amin' izao tontolo izao izy ireo, ary ao anatin'ny haizim-be izay mandrakotra ny olona tahaka ny aloky ny fahafatesana. Tokony hofehezin'ny Fanahy Masina ny tsirairay avy amin'ny fiangonan'i Kristy, mba tsy handalovan'izy ireo ao anatin'ny fanandramana miovaova sy tsy miorina tsara. Tokony hiorim-paka sy hijoro tsara amin'ny fahamarinana izy ireo.
Rehefa mazava tsara araka ny tokony ho izy noho ny fahalalana noraisina tao anatin'ny fitsapana ny fifaliana noho ny hery manavotra ananan'ny fahamarinan'i Kristy, dia hahasarika tokoa ny fiangonana, ary hisy olona izay hampianatra ny lalan'Andriamanitra amin'ireo mpandika lalana, ka hiova fo amin'ny fahamarinana ao amin'i Jesôsy ny mpanota. Mila miova fo ireo izay milaza azy ho mpivavaka, satria novesaran' i Satana fitaka avy aminy ny fanahin'izy ireny.
Tonga tempoly marina ho an'ny Tompo ny fanahy izay ampifandraisina manokana amin'i Kristy, satria natao fahendrena, fahamarinana, fanamasinana, ary fanavotana ho an'ny mpino i Jesôsy . Izay nanolo-tena tanteraka tamin'Andriamanitra dia mahatsapa ny fanatrehan'i Kristy mitondra fanavotana. Manana faharetana ara-panahy izany olona izany ary manana fiadanam-panahy avy amin'ny fianarana tamin'i Kristy, ilay malemy fanahy sy tsy miavona am-po. Matoky an'i Jesôsy ho fahombiazany sy fahamarinany izy, ka feno fahaizana mianina mahafinaritra ny fanahiny.
Inona no fifalian'ny Kristianina? Ny vokatry ny fahatsapana ny fanatrehan'i Kristy. Inona no fitiavan'ny Kristianina? Ny fanehoana ny fitiavan'i Kristy. Ny vokatry ny fiasan'ny Fanahy Masina. Rehefa mibanjina ny hazo fijalian'i Kalvary isika dia mahita an'i Jesôsy , maty noho ny fahotan'izao tontolo izao, mba hampahazava eo anatrehan'ny fanahy torotoro, amin'ny alalan'ny fahafatesany, ny fiainana sy ny tsy fahafatesana mandrakizay. I Jesôsy no fahatanterahan'ny zava-drehetra ary tsy afaka manao na inona na inona isika raha tsy ao Aminy. Tsy hisy mihitsy ny fiainana ara-panahy raha tsy misy an'i Kristy. — RH, 4 Des. 1894.